ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက် ပျံ့နှံ့နေချိန် မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့် သလား? – Let Pan Daily
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ (၃) ခုကို သိစေချင် ပါတယ်။
၁။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဟာ တုပ်ကွေးကို ကာကွယ် တဲ့ဆေးပါ။ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်တဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့က ရောပြီး ကိုဗစ်ကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သလို ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိပါ။ တုပ်ကွေးကိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင် ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖျားနာတဲ့အခါ ကိုဗစ်မှန်းသိရတာပေါ့ ဆိုတာမျိုးလို ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖျားတဲ့အခါတိုင်း ကိုဗစ်ပဲရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိနိုင်သေးလို့ ကိုဗစ်မှန်းသေချာသိဖို့က swab ယူစစ်ဆေးမှု လုပ်ကို လုပ်ရမှာပါပဲ။
၂။ လက်ရှိမှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ဈေးကြီးနေပါတယ်။ ဘာလို့ဈေးကြီးလဲ ဆိုတော့ အဖြေကရိုးရှင်းပါတယ်။ ဈေးကွက် သဘောအရ ဝယ်လိုအားများရင် ဈေးကတော့ တက်မှာပါပဲ။ လူတွေစုပြုံဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဈေးနှုန်းက တက်လာမှာပဲ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို နှစ်တိုင်းမြင်ဖူးနေကျပါ။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သူတွေက ဘယ်သူတွေ လဲ၊ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သူတွေကတော့ ကလေးငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နှလုံး ဆီးချို သွေးတိုးစသဖြင့် နဂိုရောဂါအခံရှိပြီး ကိုယ်ခံအားနည်းနေတဲ့သူတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ်က သွားလာ စားသောက်နေနိုင်တယ်၊ လူငယ်လူရွယ်သန်မာဖြတ်လတ်တယ် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လူတိုင်း တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေ ဝိုင်းဝယ်နေ ရင်တော့ ဈေးတက်ပြီး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဆီကို မရောက်ဘဲဖြစ်မှာပဲ။ Mask (နှာခေါင်းစည်း) ကိစ္စမှာလည်း ဒီလိုပဲဆိုတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ ထိုးတာကို ကျွန်တော်ကတော့ ဆန့်ကျင် ပါတယ်။
၃။ ကာကွယ်ဆေးထိုး ထားပေမယ့်လည်း တုပ်ကွေးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်ဆိုပြီး ငါကတော့ ရောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူးသတ်မှတ် ကာကွယ်ရေးတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင် တုပ်ကွေးတင်မကဘဲ ကိုဗစ်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
လက်ဆေးတာ၊ နှာခေါင်း စည်းတပ်တာ၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေ ကိုရှောင်ရှားတာ၊ မျက်နှာကိုလက်နဲ့ ထိတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင် တုပ်ကွေးရော ကိုဗစ်ရောအပြင် တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျ ပြံ့နှံ့နခြေိနျ မှာ တုပျကှေး ကာကှယျဆေးထိုးသငျ့ သလား?
ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ (၃) ခုကို သိစခေငျြ ပါတယျ။
၁။ တုပျကှေးကာကှယျဆေးဟာ တုပျကှေးကို ကာကှယျ တဲ့ဆေးပါ။ ကိုဗဈကို ကာကှယျတဲ့ဆေးမဟုတျပါဘူး။ တခြို့က ရောပွီး ကိုဗဈကိုပါ ကာကှယျနိုငျသလို ပွောကွတာတှရှေိပါတယျ။ ကိုဗဈအတှကျ ကာကှယျဆေးမရှိပါ။ တုပျကှေးကိုတော့ ကာကှယျဆေးထိုးနိုငျ ပါတယျ။ ဒီတော့ ဖြားနာတဲ့အခါ ကိုဗဈမှနျးသိရတာပေါ့ ဆိုတာမြိုးလို ပွောကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖြားတဲ့အခါတိုငျး ကိုဗဈပဲရှိတာ မဟုတျပါဘူး။ တခွားအကွောငျးအရာတှလေညျး ရှိနိုငျသေးလို့ ကိုဗဈမှနျးသခြောသိဖို့က swab ယူစဈဆေးမှု လုပျကို လုပျရမှာပါပဲ။
၂။ လကျရှိမှာ တုပျကှေး ကာကှယျဆေးတှဟော ဈေးကွီးနပေါတယျ။ ဘာလို့ဈေးကွီးလဲ ဆိုတော့ အဖွကေရိုးရှငျးပါတယျ။ ဈေးကှကျ သဘောအရ ဝယျလိုအားမြားရငျ ဈေးကတော့ တကျမှာပါပဲ။ လူတှစေုပွုံဝယျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဈေးနှုနျးက တကျလာမှာပဲ။ ဒီလိုအဖွဈအပကျြမြိုးကို နှဈတိုငျးမွငျဖူးနကေပြါ။
တုပျကှေးကာကှယျဆေးထိုးသငျ့သူတှကေ ဘယျသူတှေ လဲ၊ တုပျကှေး ကာကှယျဆေး ထိုးသငျ့သူတှကေတော့ ကလေးငယျတှေ၊ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ နှလုံး ဆီးခြို သှေးတိုးစသဖွငျ့ နဂိုရောဂါအခံရှိပွီး ကိုယျခံအားနညျးနတေဲ့သူတှေ၊ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေးနတေဲ့သူတှပေါ။ ကိုယျက သှားလာ စားသောကျနနေိုငျတယျ၊ လူငယျလူရှယျသနျမာဖွတျလတျတယျ လုပျနိုငျကိုငျနိုငျတယျဆိုရငျ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးနညျးပါတယျ။
အဲဒီလိုမြိုး ခှဲခွားမှုမရှိဘဲ လူတိုငျး တုပျကှေးကာကှယျဆေးတှေ ဝိုငျးဝယျနေ ရငျတော့ ဈေးတကျပွီး တကယျလိုအပျနတေဲ့သူတှဆေီကို မရောကျဘဲဖွဈမှာပဲ။ Mask (နှာခေါငျးစညျး) ကိစ်စမှာလညျး ဒီလိုပဲဆိုတာကို မွငျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မလိုအပျဘဲ ထိုးတာကို ကြှနျတျောကတော့ ဆနျ့ကငျြ ပါတယျ။
၃။ ကာကှယျဆေးထိုး ထားပမေယျ့လညျး တုပျကှေးဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ကာကှယျဆေးထိုးထားတယျဆိုပွီး ငါကတော့ ရောဂါမဖွဈနိုငျဘူးသတျမှတျ ကာကှယျရေးတှမေလုပျဘူးဆိုရငျ တုပျကှေးတငျမကဘဲ ကိုဗဈလညျး ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
လကျဆေးတာ၊ နှာခေါငျး စညျးတပျတာ၊ လူထူထပျတဲ့နရောတှေ ကိုရှောငျရှားတာ၊ မကျြနှာကိုလကျနဲ့ ထိတာတှမေလုပျဘူးဆိုရငျ တုပျကှေးရော ကိုဗဈရောအပွငျ တခွားအသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတှကေိုပါ ကာကှယျပွီးသား ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
အမေရိကန် တွင် (၁)ရက်ထဲ ကူးစက်သူ (၄၇,၀၀၀) တိုးလာကာ ကပ်ရောဂါ စဖြစ်ချိန်မှ ယနေ့ထိ စံချိန်တင် အများဆုံး ကူးစက်မှုဖြစ်ဟု ထုတ်ပြန်